သူခိုးများ- လက်ကို ဖြတ်ကြ « ကုရ်အာန့် သုတ - Quranic Knowledge Blog - Weekly Articles
September 25th, 2010 by Ko Htay Lwin Oo
သူခိုးများ- လက်ကို ဖြတ်ကြ
In Quranic Knowledge, Tags: cut hands, Cutting hands, punishment, thief Tweetယခုလက်ရှိ ခေတ်သစ်ကမ္ဘာ၏ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်း တည်ထောင်မှု၊ တရားစီရင်မှုနှင့်အုပ် ချုပ်ရေးယန္တယားများမှာ အစ္စလာမ့်အင်ပါယာများ ကျင့်သုံးတည်ဆောက်ခဲ့သည့်နည်း နာ နိသယျ များမှကူးယူတုပ သုံးသပ်ဖွင့်ဆိုလျှက် ရေးဆွဲယူထားမှုများဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ သမိုင်းအား ကျေညက်သူတိုင်း နားလည်ထား ရပေသည်။ ထို့ကြောင့်အစ္စလာမ့်အင် ပါယာ များအား ယုံကြည်မှု ကြိုးဖြင့် ဖွဲ့နှောင်တည်ဆောက်သော အင်ယာပါဟု ကမ္ဘာ့သမိုင်း ပညာရှင် များက ကင်ပွန်းတပ် ထားခြင်းပင် ဖြစ်တော့သည်။
အနောက်တိုင်းမှ ပေါ်တူဂီ၊အင်္ဂလိပ်၊ စပိန်၊ပြင်သစ်စသောနိုင်ငံများသည် ၄င်းတို့၏အင်ပါ ယာများလူလားမြောက်လာစဉ်က သူတို့၏ရှေ့မှလူလားမြောက်ပြီးသားအင်ပါယာ များဖြစ် သည့်အော် တိုမင်နှင့် မွန်ဂိုးအင်ယာတို့ရှိ အုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေး ဥပဒေများ အား တုပယူခဲ့ခြင်း၊ အစ္စလာမ်မစ် ကော်ဒိုဗာတက္ကသိုလ်၊ ဘက္ကဒတ်တက္ကသိုလ်များမှ ပ ညာနို့ရည်များအား သောက်စို့ ခဲ့ ရခြင်းတို့မှ မကင်းခဲ့ချေ။
စံထားလောက်သော အစ္စလာမ့်အုပ်ချုပ်ရေး ထွန်းကားသည့် ခေတ်များတွင်ဥပဒေ ရေး ဆွဲမှုများကို ကျမ်းမြတ်ကုရ်အံပါ သွန်သင်မှုအားအခြေခံကောက်ယူ ဖွင့်ဆို၍ ရေးဆွဲခဲ့ သည်သာဖြစ်ပြီး၊ အာရဗ်ရိုးရာ ဓလေ့ထုံးတမ်း များ အား အရေးတယူ နေရာပေး ခဲ့ခြင်းများ မတွေ့ရပေ။
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အံပါ- လူ့အခွင့်အရေး၊ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး၊ အစ္စလာမ် မဟုတ်သူများ ၏ အခွင့်အရေးများ၊ တ ရားစီရင်မှု ပိုင်းဆိုင်ရာ၌ ဂျူးဘာ သာဝင်တို့အား သူတို့၏ အသိုင်း အ၀ိုင်းတွင်း ၌ သူတို့၏ ဥပဒေဖြင့် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ပေးခြင်းများ၊ ခရစ်ယာန်များအားလည်း အလားတူအခွင့်အရေး ပေးခြင်းများရှိနေပြီး၊ အစ္စလာမ့်အသိုင်းအ၀ိုင်းတွင်မူ ကျမ်းမြတ် ကုရ်အံပါ ဥပဒေအတိုင်း သာ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန်ကိုသာ သွန်သင်ထား ပေသည်။ အခြား သော ဘာသာတရား များအပေါ်တွင် ထိုကဲ့သို့ အခွင့်အရေး ပေးထားခြင်း၌ ကျမ်းမြတ် ကုရ်အံပါ အဓိပ္ပါယ်အား ဖွင့် ဆိုနား လည် မှုများတွင် မကြာခဏ လွဲမှားခြင်း များကို တွေ့နေရမှုများကိုလည်း ၀မ်းနည်းဘွယ် တွေ့နေ ရပေသည်။
ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာ့လူသားအများစုကြီးက အစ္စလာမ်သာသနာဝင်တို့သည် ဂျူးတို့၏ ဓမ္မဟောင်း ကျမ်းစာနောက်သို့ လိုက်သူများဖြစ် သည်ဟုနားလည် ထားသည်များ ရှိနေတော့သည်။ အမှန် တကယ်တွင်မူ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အံသည် ကိုယ်တော်မုဟမ္မဒ်ထံ၌ ကိန်းဝပ် သိမြင်သည့် ဥာဏ်စဉ်တော်အား မှတ် တမ်းတင် ထားခြင်းဖြစ်၍ ဓမ္မဟောင်း ဓမ္မသစ်တို့နှင့် လားလားမှ မသက် ဆိုင်ပေ။ သို့သော် ယခုအကြောင်း အရာတွင်မူ ခိုးမှုနှင့် စပ်လျှဉ်း၍ မည် သို့ အရေးယူရ မည်ဟူသည့် ကျမ်းမြတ် ကုရ်အံပါ ဝေါဟာရ စကားလုံး များအား ရှင်းလင်းဖေါ်ပြ မည်ဖြစ်၍ ကျမ်းစာသဘော တ ရားတို့အား အကျယ် မ ချဲ့ လို တော့ပါ။
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အံအား ရိုးရာအစဉ်အလာအစွဲဖြင့် အလျှင်စလိုဖွင့်ဆိုတတ်လေ့ရှိသော ဗလီ ဆရာများ၏ အာဘော်နောက်သို့လိုက်၍ သူခိုး၊သူခိုးမတို့အား ခန္ဓာကိုယ်မှလက်များ ကိုဖြတ်တောံ ပစ်ရမည်ဟုလူသားအများစုကြီးက နားလည်ထားလျှက် အစ္စလာမ့်ဥပဒေ သည် အလွန်တရာ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်လှသည်ဟု သတ်မှတ်လေ့ရှိနေတော့သည်။ အမှန်တကယ်တွင်- ခရစ်ယာန် သမ္မာကျမ်းစာ၏ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း- ထွက်မြောက်ရာ ၂၂း၂ တွင်
(သူခိုးသည်အိမ် ကိုဖေါက်ထွင်းစဉ် သူတပါးတွေ့၍ သေအောင်သတ်သော်လည်း သေစားမသေစေရ။ သို့သော် နေထွက်လျှင် သေစား သေစေရမည်– ဟု ဥပဒေ သတ်မှတ်ထားပေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ နေမထွက်မှီ (ညဘက်) အခြားသော သက်သေများ မတွေ့လျှင် သူခိုးအား အသေသတ်ပစ်ခွင့် ရှိနေကြောင်း- ကို အတိအကျ ဖေါ်ပြထား ပေတော့ သည်။ နေထွက် ၍ နေ့ဘက်၌မူ အခြားသူငါများတွေ့နေလျှင် လူတစ်ဦးအား အသေသတ်ခြင်းမှာ အမြင် မတော် ဖြစ်နေ၍ ထိုသူခိုးအား ခိုးသော ပစ္စည်း၏ နှစ်ဆ ပြန်လျှော်စေရမည်- ပြန်လျှော်စရာ မရှိလျှင် ထိုသူခိုး သည် မိမိ ကိုယ်မိမိ ရောင်း၍ ကျွန်ခံစေရမည်ဟု ဥပဒေ သတ်မှတ်ထားပေသည်။)
ထိုသို့သော ဥပေဒေသည် သူခိုးအား လက်ဖြတ် ပစ်ခြင်းထက် ပိုမို၍ ရက်စက် လှသည်ဟု မမြင်တတ်၊ မခံစားတတ် သူတို့အတွက် လွန်စွာပင် ၀မ်းနည်း စရာ ကောင်းတော့သည်။ မိမိ၏ အပြစ် ကျူးလွန်မှုအတွက် အသေသတ်ခံလိုက်ရခြင်း၊သို့မဟုတ်ဘ၀တစ်လျှောက် လုံး အရှင်လတ်လတ် ကျေးကျွန်အဖြစ် ဘ၀အားပေးအပ်လိုက်ရခြင်းသည် လက်တစ်ဆစ် အားပေးလိုက် ရ ခြင်း ထက် ပိုမို၍ တရားမျှတ ပါ၏လော ဟု ပြန်လည်သုံး သပ်စရာ မ ကောင်းလှပေသလော။
အခြားတစ်ဘက်တွင် အစ္စလာမ် သာသနာ ၀င်များကိုယ်တိုင် ဆင်ခြင်ရမည့် အချက်မှာ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အံပါ- ဝေါ ဟာရ အသုံးအနှုန်းများပင် ဖြစ်ပေ သည်။ ကျမ်းတော်၌ သူခိုး၊ သူခိုးမများနှင့် စပ်လျှဉ်း၍-
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَ اَ زء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞
သူခိုး၊ သူခိုးမတို့အား သူတို့၏ လုပ်ဆောင်ရာ အကျိုးရလဒ်အတွက် သူတို့၏ လက်များကို ဖြတ်တောက်ကြလော့။ အလ္လာဟ်အရှင်၏ထံမှ နမူနာပေးခြင်း ဖြစ်၏။ ဧကန်ပင် အလ္လာဟ်အရှင်သည် ကြီးမြတ်သော ဓမ္မသတ်ရှင် ဖြစ် တော်မူ၏။ (၅း၃၈)
ဤဥပဒေတွင် ပြောဆိုထားသော فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا သူတို့၏လက်များကို ဖြတ်တောက် ကြလော့- ဟူသော စကား လုံးမှာ သူတို့ ကိုယ်အင်္ဂါမှ လက်များကို ပြောဆိုခြင်း လုံးဝ မဟုတ်ကြောင်းကို ထို ဥပဒေအား ဆက်လက်ဖေါ်ပြ ထားသည့် ၅း၃၉
ပါ- ထိုသို့ အမိုက်စီး မိပြီးနောက် ခ၀ါချ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ခဲ့လျှင်- သူတို့အား၊ ဧကန်ပင် အလ္လာဟ်အရှင်သည် သင်ပုန်းချေပေး တော်မူ၏၊ ဧကန်ပင် အလ္လာဟ်အရှင်သည် လွတ်ငြိမ်းစေသော အရှင် အကြင်နာရှင် ဖြစ်တော်မူ၏-
ဆိုသည့် စကားက ထောက်ပြထားပေသည်။ အမှန်တကယ် လက်ချောင်း၊လက်ဆစ်များ အား ဖြတ်တောက်ပြီးသူအား ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ မည်သို့မျှပြန်လည်လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေး၍ မရနိုင်တာ့ပေ။ (ဖြတ်ပြီးသားလက်များ ပြန် လည်၍ အကောင်းပကတိ ဖြစ်လာတော့မည် မဟုတ်ချေ။)
အခြားတဘက်တွင် အကယ်၍ အမှန်တကယ်ပင် လက်များကို ဖြတ်ပစ်ရမည်ဟု သတ် မှတ်သော် ယနေ့မွတ်စလင်နိုင်ငံများတွင် အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေသော ဘုရင်များ၊ သမ္မတ များ၊ အာဏာ ပိုင် များမှ အများစုကြီး၏ လက်များ ကို အလျှင်အဦး ဖြတ်တောက်ပစ် ရ မည်သာ ဖြစ်တော့သည်။ သူတို့သည် နိုင်ငံပိုင် ပစ္စည်များအား မောင်ပိုင်စီး ထားခြင်း၊ အာ ဏာသုံးပိုင်ခွင့်အား အများသူငါ မ သိအောင် ခိုးသုံးခြင်း (အလွဲသုံးစား ပြုခြင်း)များ အား အကြီးအ ကျယ် ပြုလုပ်နေသူများသာဖြစ်ပေသည်။ ထိုသို့ကြီးမားသော သူခိုးအကြီးစား ကြီးများ၏ လက်များကို မဖြတ်ဘဲ လျှက် ဆင်းရဲ မွဲတေ၍ စားစရာ မရှိ သောသူက ထမီ စုပ်ခိုးမိ သည်ကိုသာ အပြစ်ယူလက်ဖြတ် ပစ်မည်ဆိုက- ထိုဆင်းရဲသား၏ သားသမီး၊ သားမယားတို့အား မည်သူက လုပ်ကိုင်ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက် ၊နှိုင်အံ့နည်း ဟူသည် ကိုလည်း စဉ်းစားစရာ လိုပေတော့သည်။
ကျမ်းတော်သည် ထိုသို့မညီမျှသော တဘက်စောင်းနင်း ဖြစ်သော၊ လူသားမဆန်သော ဥပဒေများအား မည် သည့်အခါတွင်မှ ချမှတ်ထားခြင်း မရှိပေ။ သို့ဖြစ်၍ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا သူတို့၏ လက် များကို ဖတ်တောက်ကြလော့
ဟူသည့် စကားလုံး နှစ်လုံးအား သေချာစွာ လေ့လာရန် လိုအပ်ပေသည်။ ထိုစကားလုံးနှစ် လုံးမှ ဖြတ်တောက်ကြ လော့၊ ဖြတ်တောက်သည် ဟု အနက် ကိုပေးသည့် (ကတွအ) ဆိုသော စကား လုံးမှာ အဆက်အသွယ်ဖြတ်ခြင်း၊ အရာတစ်ခုကို အမှန်တကယ် ပင်ဖြတ် ၊ခြင်းတောက်ခြင်း၊ ဆွေမျိုးသားချင်းများအကြား ခေါ်ထူးမေး ပြောမပြုလုပ်ခြင်း၊ စီးပွားပိတ် ဆို့ခြင်း-စသည့်စကား လုံးများအဖြစ်သုံးပေသည်။ အဆက်အသွယ်ဖြတ်ခြင်းဟုသည့် အဓိပ္ပါယ်ကိုကျမ်း၏ ၂း၂၇နှင့် – မြောက်များစွာသော နေရာများ တွင်တွေ့နိုင်ပြီး၊ စီးပွားရေး ၊ ဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ အရေးယူခြင်း အဓိပ္ပါယ်ကို ၅း၃၃ တွင် တွေ့နိုင်ပေသည်။
အဆက်အသွယ်ဖြတ်ခြင်း၊ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ခြင်း ဆိုသည်တွင် ရုပ်ဒြဗ်ကိုယ် ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းအား ဖြတ်တောက်သည်ဟုနားလည်ယူ၍မည်သို့မျှ မဖြစ်နိုင်ချေ။ သားသမီး များအား အမွေဖြတ် စိတ်နာစရာ ဖြစ်သည်တွင် ခြေမမကောင်းခြေမ၊ လက်မ မကောင်း လက်မကိုဖြတ်ပစ်မည်ဟု သုံးနှုန်းခြင်းမျိုးသာဖြစ်၍ အမှန်တကယ် ခြေမလက် မတို့အား ဖြတ်ပစ်သူဟူ၍ မရှိချေ။
အခြား စကားလုံးတစ်ခုဖြစ်သည့် ယဒါَ يدْيِ လက်ဟူသည်မှာလည်း လုပ်ဆောင်နိုင် စွမ်းအား၊ခြေစလက်စ၊ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက် မှုလက်ရာများအဖြစ်ကျမ်းတော် တွင်မြောက် များ စွာဖေါ်ပြ သုံးစွဲပေသည်။ ထိုအချက်ကို သူတို့၏လက်ရာများကြောင့် သူတို့ သည် ၀ဋ်ကြွေးကြီး ခံရလတ္တံ့ဟူသော ၀ါကျပေါင်းများစွာတွင် တွေ့နိုင်ပေသည်။ ဤ၀ါ ကျများ တွင် ဆိုလိုသော သူတို့လက် များကြောင့် ဆိုသည်မှာ သူတို့၏ လုပ်ရပ်များကြောင့်- ထိုလုပ် ရပ်ဖြစ် တည်လာရန် စေ့စော်ပေးသော သူတို့၏ စိတ်၊ စာရိတ္တ၊ အကျင့် များကြောင့် ဖြစ် သည်ဟု လူတိုင်းနား လည် နိုင်ပေ သည်။
သို့ဖြစ်၍ ကျမ်းတော်တွင်ဖေါ်ပြသော သူတို့၏လက်များကိုဖြတ်တောက် ကြလော့ဆို သည် မှာ သူတို့၏လုပ်ဆောင်နိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးများကို တားဆီးဖြတ်တောက်ခြင်းမျိုးသာ ၊ဖြစ်ပေသည်။ လူသား၏ စိတ်စရိုက်လှုံ့ဆော် ခိုးယူတတ်ခြင်းများကို အဆင့်ဆင့်စောင့် ကြပ်သည့် နည်းပညာများဖြင့် စောင့်ကြပ် ထားကြဟုသာဖြစ်တော့သည်။ ငွေကိုင်စာရေး တစ်ဦးငွေစလေးများ မခိုးနိုင် ရန်သူ့အား စောင့်ကြည့်ရမည်၊ စာရင်းစစ်များဖြင့် စစ်ဆေးရ မည်၊ ကွန်ပြူတာနည်းပညာများ ကင်မရာများဖြင့် စောင့်ကြပ်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ မည် သို့မှ တားဆီး၍ မရလျှင် ထိုခိုးတတ်သူအား ၊ငွေနှင့် ကြေးနှင့် သူခိုးယူလိုသော ဥစ္စာ ပစ္စည်းဖြင့် မပတ်သက် မထိစပ်နိုင်ရန်အလုပ် ထုတ်ပစ်ရမည်။ စာရိတ္တလေ့ကျင့်ရေး ၊ကျောင်းများသုိ့ ပို့ဆောင်ရ မည် ဖြစ် သည်။
အခြားတဘက်တွင် ပြည်သူအများစု ခိုးတတ်သော အကျင့်များ ဖြစ်လာလျှင် ထိုပြည်သူ အား ဦးဆောင် အုပ်ချုပ် နေသောအာဏာပိုင်များတွင်လည်း တာဝန်မကင်းကြောင်း ခံ ယူရဲရ မည်။ပြည် သူတို့၏ စားဝတ်နေရေးအတွက် ခေတ်နှင့်အညီ လိုက်လျှော ညီထွေ ၊ဖြစ်စေရန် တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်များက ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ပိုမို၍ ဆင်ခြင်ရမည်မှာ မိမိကြောင့် သူတစ် ပါးအား သူခိုး မဖြစ်စေရန်ပင် ဖြစ်တော့သည်။ ဆိုလို သည်မှာ မိမိ သည် ဘုရားကျောင်းသို့ သွားသည်- မိမိ၏ ဖိနပ်အား မဆင်မခြင်ချွတ်ထား ခဲ့သည်- ဘုရားကျောင်း မှ ပြန်လာ သောအခါတွင် မိမိဖိနပ် မရှိတော့ခြင်း သည်– မိမိ၏ မ ဆင်ခြင်မှုကြောင့် အခြားသူတစ်ဦးမှာ သူခိုးဖြစ်သွား ရသည် ဟူသော အသိမျိုးအား ထား မိစေ ရန်သာဖြစ်သည်။
သူခိုးဟု သတ်မှတ်တိုင်း လက်ဖြတ်ရမည် ဆိုက– ထိုသတ်မှတ် သူကိုယ်တိုင် မိမိ၏လက် ကို မိမိအလျှင်ဖြတ်ပစ်ရမည်သာ ဖြစ်ပေသည်။ လူတိုင်းနီးပါးသည် မိဘထံမှကျောင်းနေ ဘက် သူ ငယ်ချင်း ထံမှ၊ ရပ်ထဲရွာထဲမှ အပျော် ဖြစ်စေ၊ ကြည်စား၍ ဖြစ်စေ၊ တန်ဘိုးမရှိဟု ယူဆလျှက်ဖြစ်စေ၊ မက်မော၍ ဖြစ်စေ၊ လိုအပ်လွန်း၍ ဖြစ်စေ၊ပစ္စည်းအတို အထွာလေး များကိုယူခဲ့မိသူများ သာဖြစ်တော့သည်။ နောက်ဆုံးအဆင့်ကျောင်းစာမေးပွဲတွင် စာမေး ပွဲအောင်လိုဇောဖြင့် စာခိုးချခဲ့မှုများ ရှိနေတတ်ပေသည်။
ကုရ်အံကျမ်းတော်တွင် ဖေါ်ပြသောသူခိုး၊ သူခိုးမဟူသည်တွင် မည်သူ့ထံမှ မည်၍မည် မျှလောက် မည်သည့်အခြေအနေတွင်ဟု ဖေါ်ပြမထားသည့်အတွက် သူတစ်ပါးသက်ဆိုင် သူမသိအောင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ယူမိခြင်းအားလုံးမှာ အကြုံး ၀င်နေပေ သည်။
သို့ဖြစ်၍ကျမ်းတော်ပါ သွန်သင်ချက်အား စနစ်တကျ မလေ့လာဘဲလျှက် လက်ဖြတ်လို သည့် သူများအနေဖြင့် မိမိသည်ခိုးခြင်းမှ ကင်းပါ၏လောဟူသည်ကို အလျှင်အဦးစဉ်းစား သင့် လှပေ သည်။
ကမ္ဘာ့ဥပဒေပညာရှင်များကိုယ်တိုင် အတုယူစံထားလောက်သော ကျမ်းမြတ်ကုရ်အံ၏ ဥပဒေများမှာ ရိုးရာဗလီဆရာများ၏အောက်၌ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်နေရမှုများအားကျွန်ုပ် တို့ အနေဖြင့် ၊ပြန်လည် ဆင်ခြင်သင့်ရန်လို အပ်ပေတော့သည်။
(၅း၃၈) ရဲ့ အမိန့်ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်ဟာလူတစ်ဦးရဲ့ physical
“လက်” ကို ရည်ညွန်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ အစ်ကိုကြီးတို့ကယုံကြည်
နေရင်မေးခွန်းတစ်ခုမေးလိုပါတယ်။ “ကျမ်းတော်မြတ် (၄း၃၄)မှာ
ပါတဲ့ “ဝဿွ်ရိဗူဟွန်းန” ဆိုတဲ့အာယသ်တော်ကို ဘယ်လိုနားလည်ပါ
သလဲ ခင်ဗျား?” ကျေးဇူးပါ အစ်ကိုကြီး။
3226 Sep 10 @ 12pm
kyaw kyaw Oo says:
Salam U Htay Lwin Oo,
Thank you for the wonderful post. Following post was Posted on May 21, 2009 in my Blog.
I just want to share with the readers for further discussion.
By Kyaw Kyaw Oo (21.5.2009)
Today BBC News reported about,aSomali Shariah Court ordered to cut the right hand of Mohamad Omar Ismail for stealing 10 pairs of trousers, 10 shirts, 8 other items andabag. The value of all the items are estimated to be $90.
BBC news continued
“The official quotedachapter from the Koran known as Surah Maida, verse 38, which is about stealing and relevant punishment. He said that the verse decreed that punishment for stealing was that the right hand of the thief should be cut off. “
Then the news carried on with horrific scene of amputation as “bloody hand dangled”.
What message the above BBC news convey to the readers?
Islam and the Law of Allah will be seen negative by both non Muslims and some Muslims who do not understand well about their faith.
Read the following Hadith about cutting the relationship and its punishment
(There is no sin that is more worthy of Allah hastening its punishment in this life, in addition to what He has in store for its offender in the Hereafter, more than transgression and cutting the relations of the womb.) The act of Qabil included both of these. We are Allah’s and to Him is our return.
Above Hadith says Islam does not allow the cutting the relationship with the blood relatives, forget about cutting the parts of our own Muslim brothers physically.
For the Non Muslims readers, who are not familiar with the Holy Quran, I would like all of you to read few verses of Surah Al Maidah, and its translation before the mentioned Vesre 38.
The Surah Al Maidah verse 32 says,
[مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِى إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الاٌّرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَـهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالّبَيِّنَـتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِى الاٌّرْضِ لَمُسْرِفُونَ - إِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الاٌّرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَـفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الاٌّرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الاٌّخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ - إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ]
(32. Because of that, We ordained for the Children of Israel that if anyone killedaperson not in retaliation of murder, or (and) to spread mischief in the land – it would be as if he killed all mankind, and if anyone savedalife, it would be as if he saved the life of all mankind. And indeed, there came to them Our Messengers with Al-Bayyinat, even then after that many of them continued to exceed the limits in the land!) from the land. That is their disgrace in this world, andagreat torment is theirs in the Hereafter.)
Above verse clearly stated that killing an innocent person would be as if he killed all mankind. Islam view point about killing an innocent person isamajor sin, so why the same religion will preach to do injustice to somebody who is poor, and defenseless.?
كَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً]
[وَمَنْ أَحْيَـهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً]
And the Verse 38 mentioned in BBC news should be read with the next Verse 39 together,
[وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَـلاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ - فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ - أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَـوَتِ وَالاٌّرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ]
(38. And (as for) the male thief and the female thief, cut off their hands asarecompense for that which both committed,apunishment by way of example from Allah. And Allah is All-Powerful, All-Wise.)
(39. But whosoever repents after his crime and does righteous good deeds, then verily, Allah will pardon him. Verily, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.)
Allah SWT clearly says that those who repents after his crime and does good deed to be pardoned.
Somalia is the country without Law and Order. People are poor and uneducated. The society is in chaos. In short, Somalia is far from reaching the status of Islamic State where Islamic Shriah Law applied according to the true teaching of Islam. That event should not be taken as executing the proper Islamic Law.
How is the welfare system runs in an Islamic State ?
Zakāh or “alms for the poor” is the Islamic principle of givingapercentage of one’s income to charity. It serves principally as the welfare contribution to poor and deprived people in the Muslim lands, although others may havearightful share.
It is the duty of the Islamic state not just to collect Zakat, but to distribute it fairly as well.
It is an obligation on Muslims to pay 1/40 (2.5%) of the wealth which they have had forafull lunar year 1/40 (2.5%) of goods used for trade, and 5% or 10% of certain type of harvests depending on irrigation.
In Somalia do they have this type of welfare system to distribute money? Definitely not. That is the reasons duringalast few months, there are so many cargo ships were attacked in the Gulf of Eden by the pirates from Somalia as they are desperate to survive in the Lawless country. These pirates activities clearly highlighted Somalia asaLawless Country.
If Somali isagenuine Islamic State, where all the rich people pay the poor due, there will be no reason to see this kind of petty theft case. Even the person is caught; he will haveachance to repent by doing good deeds as Allah SWT clearly stated in His Holy Book.
1027 Sep 10 @ 10pm
2010/09/26 at 12:44 pm ကမေးထားသော ကျာကျာကြီး၏ မေးခွန်းသည် မြန်မာမွတ်စလင်မ် များတွင်မက မွတ်စလင်မ် မဟုတ်သော မွတ်စ လင်မ်များနှင့် နီးစပ်သည့် မြန်မာစာဖတ် ပရိတ်သတ်များ အတွက်ပါ သိသင့်သိထိုက်သော အ ကြောင်းအရာ ဖြစ်နေသည့်အတွက် ကျာကျာကြီး တစ်ဦး တည်းကို သီးသန့်မပြန် ကြားတော့ဘဲ ဆောင်းပါးအဖြစ် ရေးသား၍တင်ပြ လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆောင်ပါး အသစ်ဖက်ရန်….
0028 Sep 10 @ 12am
muhamad A Li says:
0014 Jan 11 @ 8pm
« ဘာသာရေးကို ဂဂနနမသိဘဲ အရမ်းကာရော မဝေဖန်ကြလေနဲ့